केहो त डाइटिङ गर्ने सही तरिका ? यस्ता छन् उपयुक्त बिधी
✍️: टिभी अन्नपूर्ण	 🕒 प्रकाशित: २०७८ बैशाख ८, बुधबार ०९:१७
Measuring tape around slim beautiful waist.
डाइटिङ अर्थात शरीरलाई आवश्यक पर्ने मात्रामा मात्रै खाद्य पदार्थ लिनु स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले निकै राम्रो मानिन्छ । तौल व्यवस्थापन गर्न डाइटिङ अर्थात खानाको मात्रा घटाउनु उपयुक्त विधि पनि हो । खास गरी सहरी क्षेत्रमा खानाको मात्रा घटाउने वा केही समय नखाएर डाइटिङ गर्ने ट्रेन्ड छ ।
अधिकांशमा खाना नखाएर वा व्रत बसेर तौल व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि छ । पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रमा ‘इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ’को प्रचलन बढ्दै गएको छ । यो ट्रेन्ड जापानबाट सुरु भएको हो । जापानमा मोटोपना रोक्न फास्टिङ अर्थात केही समय भोकै बस्ने चलन छ ।
जनस्वास्थ्यविदका अनुसार यो चलन हाम्रो परम्परागत व्रत बस्ने चलन जस्तै हो । तर, यसमा विभिन्न विधि अपनाउने गरिन्छ । पहिलो विधि दैनिक दुई पटक आठ–आठ घन्टामा मात्र खाना खाने, दोस्रो २४ घन्टाको व्रत अर्थात बिहान ८ बजे खाना खाएपछि अर्को दिन ८ बजे मात्रै खाने गरिन्छ । यस्तै साताको दुई दिन थोरै क्यालोरीयुक्त र बाँकी दिन सामान्य खाना खाने चलन पनि छ । यो विधि नियमित अपनाउँदा बिस्तारै क्यालोरी खपत हुन्छ । पोषणविद भन्छन्, ‘फास्टिङ बारे प्रत्येक व्यक्तिमा फरक(फरक धारणा रहेको छ । शरीर फिट राख्न चाहनेका लागि यस्ता अवधारणा बढी लोकप्रिय छन् ।’
यस कारण फास्टिङ आवश्यक
चिकित्सकहरूका अनुसार, व्रत बस्दा अर्थात फास्टिङले शरीरका कोषहरू भोकाउँछन् र भोकाएका कोषहरूले शरीरका हानिकारण कोषहरूलाई नष्ट गर्छन् । योसँगै फास्टिङ गर्दा क्यालोरी कम खाइन्छ, जसले तौल नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउँछ । तर, स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका वा कुनै स्वास्थ्य समस्याको उपचार गरि रहेका व्यक्तिका लागि फास्टिङ फाइदाजनक हुँदैन । तर, तौल व्यवस्थापनका लागि अनावश्यक रूपमा डाइट गर्ने र डाइटिङ प्रतिको गलत अवधारणाले आम स्वास्थ्यमा असर पनि परि रहेको पोषणविदको भनाइ छ ।
पोषणविद ‘अधिकांशमा कम खाना खाएर वा एक दिनभरि भोको बसेर तौल व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा छ । यस्तै दिनभर व्रत बसेर बेलुका टन्न खाना खाने चलन पनि छ । जसले तौल घट्नुको सट्टा झनै बढेर जान्छ ।’ खानाको मात्रा एक्कासि कम गर्दा शरीरलाई चाहिने आवश्यक मात्रा कम भएर प्रतिकूल असरसमेत परि रहेको हुन्छ । साथै नियमित खानामा शरीरलाई चाहिने आवश्यक सप्लिमेन्टहरू समावेश गरिएको हुँदैन । योसँगै फास्टिङ गर्दा शरीरमा क्यालोरीको मात्रा कम भए पनि आवश्यक प्रोटिनको कमी हुन जान्छ । दिन भरि केही नखाएर बस्नु मात्रै डाइटिङ नभएको उनको भनाइ छ ।
अधिकांश डाइट प्लान तौल व्यवस्थापनमा सीमित हुन्छन् । सहरी क्षेत्रका वयस्कहरूमा तौल व्यवस्थापन चुनौतीको विषय बन्ने गरेको छ । व्यस्त जीवनशैलीका कारण शारीरिक व्यायाम र शरीरिक परिश्रमको अभावका कारण अधिकांशको रोजाइमा डाइटिङ पर्ने गर्छ । तर, कतिपय अवस्थामा अस्वस्थ डाइटिङले स्वास्थ्य समस्या पनि निम्त्याइ रहेको छ । दीर्घ रोग वा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, युरिक एसिड, स्ट्रोक, हृदयाघात आदि नियन्त्रणका लागि पनि डाइटिङ गर्न सकिन्छ । स्वस्थ डाइटिङका लागि स्वास्थ्य अवस्थाको आधारमा खाना खाने समय र खानामा समावेश गरिने खाद्य वस्तुमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ